Asaasa: የዉስጥ አርበኛ jedhee G-7 Warra amma aangoo guddaa biyyattii qabatan dabalatee heddumminaan OPDO keessa akka galchee qabu beekamaadha. Kichuu
HomeAmharicAsaasa: የዉስጥ አርበኛ jedhee G-7 Warra amma aangoo guddaa biyyattii qabatan dabalatee heddumminaan OPDO keessa akka galchee qabu beekamaadha.
Qe’ee ODP keessa mataa walitti baachuun mumul’achaa jira jedhu keessa beektonni. Garee Abiyyi Ahimad kan Itoophiyummaa leellisanii fi garee Oromummaa dabarsinee hin kenninu jedhan gidduutti huuruu walitti dhiibuun jira jedhama. የዉስጥ አርበኛ jedhee G-7 Warra amma aangoo guddaa biyyattii qabatan dabalatee heddumminaan OPDO keessa akka galchee qabu beekamaadha.
አማራው ሁሌ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያፌዝበት ዋነኛው ምክንያት አንድና አንድ ነው:: እሱም የኦሮሞን ክንድ ስላልቀመሰ ነው:: አማራ በምንም ተዓምር በትግራይ ህዝብ ላይ አይናገርም:: ህወአት ልክ ስላስገባቻቸው የፍራቻ ጥላቻ እየነዙ ነው እንጂ ትግራይንም ሆነ ህወአትን በጣም ነው የሚፈሩት:: ለወደፊቱ ደግሞ ቅማንትም አይናገሩም:: ጀግናው የቅማንት ህዝብ ልክ አያስገባቸው ነው:: ጎንደር ከተማን ሊቆጣጠር የቀረው ምንም የለም:: አማራው ከመፍራቱ የተነሳ እሳትን ጨምሮ በየሚድያው እየወሸከቱ ናቸው::
በአንፃሩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደፈለጉ ሲረማመዱ ይታያል:: ቃላትን ሳይመርጡ እንደፈለጉ ሲዘረጥጡት ይታያል:: ይባስ ብለው ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል እንዲሉ 600 ኪሜ ተጉዘው መጥተው በኦሮሞ ሀገር (ኦሮሚያ እምብርት) ፊንፊኔ ቁጭ ብለው ኦሮሞን እየተሳደቡ በሰላም ተንደላቀው መኖራቸው ሳያንስ “ይህ ከተማ የኛ ነው” ይሉናል:: ይህንን ብለውም ምንም አልሆኑም:: እንዲያውም ኦሮሞው የራሱ የሆነውን ነገር ለድርድር አቅርቦ ማስረጃ መቁጠር ይቃጣዋል:: ” ፊንፊኔ የቱፋ ሙና ቄዬ ነበርወዘተ.. “እያለ ማስረጃ ይቆጥራል:: ይህ አካሄድ ለኔ አይመቸኝም:: የራስህ ይሆነውን ነገር መውሰድ ነው እንጂ የምን መደራደር ነው!! ለድርድር አቅርቦ ማስረጃ መቁጠር ራሱ የተሸናፊነት ምልክት ነው:: አማራው ኦሮሞን ሊያከብር የሚችለው የኦሮሞን ህዝብ ክንድ ከቀመሰ ብቻ ነው::በመለማመጥ የኦሮሞን መብት ማስከበር አይቻልም::
Gareen komaand postii kolonel Abiyyiin ajajamu dhiha oromiyaatti balaa hamaa geggeessaa jira!
Godina dhiha oromiyaatti qaamni waraana mootummaa kolonel Abiyyiin ajajamu kun saamicha maallaqaa fi qabeenyaa,mana sabboontotaa gubuu, caccabasuu horii ,loon illee saamuuf ajjeesuu hojii isaa godhatee jira.
Akkasiin guyyaa kaleessaa irraa eegalee godina Wallag lixaa aanaa boojii Coqorsaa fi aanaa Gullisoo keessatti mana oromootaa diiguu, mi’a manaa caccabsuu fi maallaqa ,qabeenyaa saamuu irratti bobba’ee jira. Aanaa #boojii #coqorsaa magaalaa #Fiigaa#koobbaraa jedhamtu keessatti RIB mana oromootaa diiguu fi caccabsuun maallaqa uummataa saamee oromoo mana hidhaatti guuraa jira!
Akkasuma Aanaa #Gullisoo magaalaa gullisootti hojii walfakkaataa hojjechuun uummata jumilaan mana hidhaatti guuraa jira. Buufani poolisii aanaa gullisoo uummataan guutamee mirgi ilmaan oromoo dhiitamaa jira!
Egaa maqaa araara jechu dawoo godhatee mootummaan odp haaloo maalif naaf sibuu diddan jechuu uummata dhiha oromiyaa irratti irree isaa jabeessee jira!
Gochi gara jabinaa uummata oromoo irratti fudhatamaa jiru kun diinumaa mootummaa wayyaanee isa of haarressine jedhu kanaati!
Oromoon lagaan qoodanii fixuun kun ammoo yaada habashootaati. Har’a wallaggaan kan gube bor oromiyaa kan biraa ni dhiisa jedhanii ush jechuun kun oromoo eessaanuu hinga’u!
Mootummaan kolonel Abiyyii jibiinsa cimaa oromoo irraa akka qabu jala murree beekuu qabna!
Mana namaa gubuu kan caale diinimmaan hinjiru!
“Finfinneen kan oromooti”